Macluumaad cusub oo laga soo saaray sababtii ay u burburtay diyaarad ay booliska lahaayeen – The Voice of Northeastern Kenya
Macluumaad cusub oo laga soo saaray sababtii ay u burburtay diyaarad ay booliska lahaayeen
Khubaro ka tirsan Kooxda wadda baaritaannada ku aadan sababaha keenay burburkii diyaar helicopter ah oo ay lahaayeen booliska ayaa sheegay in diyaaraddaas uu waday duuliye aysan xirfadiisa dhameystirneyn.
Macluumaadkaan cusub oo ay maanta shaaciyeen qaar ka mid ah jaraa’idka kasoo baxa gudaha dalka ayaa lagu sheegay in duuliyahaasi uu ku guul dareystay in uu diyaaradda ka weeciyo shimbirta lagu magacaabo qalowlaha ama bambowga oo aad ugu soo dhawaatay.
Duuliyaha oo lagu magacaabo Dennis Oduk ayaa la sheegay in uu masuuliyadda koontaroolka diyaaradda ku haleeyay duuliye kale oo la saarnaa diyaaradda oo isagana lagu magacaabo Martin Ndungu.
Arrintaas ayaa sababtay in ay diyaaradda khatar soo wajahdo ugu dambeynna ay burburto, sida ay sheegeen baareyaasha laga soo xigtay warkaan.
Diyaaraddaasi oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqaanno helicopterka ayey booliska goor dhow kusoo iibsadeen lacag dhan 683 million oo shilinka Kenya ah.
Burburka diyaaraddaasi oo dhacay 11 maalmood ka hor ayaa ahaa kii 5-aad ee noociisa ah oo ay ilaa 5 diyaaradood booliska uga burbureen intii u dhaxeysay bilaha August iyo September ee sanadkaan 2016-ka.
← Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Kenya oo ka hadlay caqabada cusub ee Kenya kasoo wajahday maxkamadda ICC-da
Dhaqaatiirta Nyeri oo dib ugu labtay shaqadoda →